I-Google Search Console Goofed Futhi Ithunyelwe Izaziso Zamanga kuWordPress | Martech Zone
NgeSonto, ngoFebhuwari 12, 2017 NgoMsombuluko, Februwari 13, 2017 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi ngiklwebha ikhanda lami lapho iGoogle ngqo iya khona nayo sesha ikhonsoli. Yize ngikholelwa ukuthi kuyinsizakalo emangalisayo ukuthola i-malware kumasayithi nokuvimbela lawo masayithi ukuthi angafakwa ohlwini lwemiphumela yosesho, angiqiniseki kangako ukuthi ngifuna iGoogle iskene amasayithi afuna izinkinga.
I-case in point kwakuyisixwayiso ngaphambi kwesikhathi esaphuma saya kimi futhi, ngicabanga ukuthi, amashumi ezinkulungwane zamasayithi athe asebenzisa inguqulo ye-WordPress ebingavikelekile. Inkinga? Kwakuyiphutha elingamanga futhi iningi lamasayithi empeleni lalisebenzisa inguqulo yakamuva ye-WordPress. Yize ngingenayo inqubo i-Google ebiyisebenzisa ukuqinisekisa amasayithi, kubonakala sengathi ukulondolozwa kwesikhashana kungenzeka kube yinkinga. Njengoba amakhasi alondoloziwe ajwayelekile kuyo yonke i-Intanethi nakumawebhusayithi e-WordPress, kubange isiphithiphithi.
Inkinga, empeleni, bekungukuthi abaningi abemukela lawo ma-imeyili kwakungamakhasimende akhokhela ukusingathwa okuphezulu nokuvikeleka, futhi futhi bane-ejensi, efana athwale, sisebenzela ukuqinisekisa ukuthi amaklayenti ethu aphephile. Lapho bethola i-imeyili efana naleyo, kuvame ukudala ukuphazamiseka impela. Ngokujabulisayo, iGoogle iphendule ngokushesha izinkundla zabo ze-webmaster ukuthi empeleni babeludalile udaba.
Sanibonani nonke - egameni lamaqembu enza lo mzamo, sicela wamukele ukuxolisa kwethu ngokudideka esikudalile. Siyawazi amacala lapho sithumele khona imiyalezo kubanikazi be-WordPress izehlakalo ezithuthukiselwe enguqulweni yakamuva kusukela kukhasa kwethu kokugcina - besisola ukuthi kuzoba khona lawa macala ngaphambi kokuba siqale umzamo wokuthumela imiyalezo. UJuan Felipe Rincón, Google
The mea culpa yaziswa, kepha noma kunjalo, kubonakala kuyinto exakayo ukuthi iGoogle izomane iqalise into enjengale iyodwa. Imicu embalwa kamuva engxoxweni, umphathi womkhiqizo wokuphepha we-WordPress oxhunywe nethimba le-Google wathi bangathanda ukusebenzisana kulokhu. Angiqiniseki ukuthi kungani lokho kungenzekanga kuqala, kepha ngiyabonga ukuthi kubhekisa kulolo hlangothi.
Yize ngingenakungabaza ukuthi iGoogle inezinsizakusebenza zokwenza lo msebenzi, anginasiqiniseko sokuthi ngiyabonga lapho inkampani iqhubeka nokunyathela khona. Ngiyalithanda iqiniso lokuthi iGoogle inikezela ngamathuluzi afana ne-Search Console, i-Analytics, i-Tag Manager, namanye ukusisiza sithuthukise indlela abasebenzisi abaxhumana ngayo namasayithi ethu. Kepha lapho empeleni beqa umugqa - njengakulesi simo nange-AMP, i-SSL, iSelula, nezinye izinhlelo, kubukeka sengathi banyathela izinzwane zethu ngokuqhubekayo.
Ukwenza izincomo kulungile, futhi ukuhlinzeka ngamathuluzi wokunikeza lezo zincomo kungcono kakhulu. Kepha lapho iGoogle iqala ukuxwayisa noma ngisho nokujezisa amasayithi angaziphathi ngendlela iGoogle efisa ukuthi ibonakale ngayo kungathi kweqa kimi.
Tags: i-google search consoleabaphathi bewebhu be-googleUJuan Felipe RincónWordPressukuphepha kwe-wordpress
Izibalo Zokukhangisa Ngemidiya Yezenhlalo Angeke Uphuthelwe!
Feb 13, 2017 ngo-9: 59 AM
I-Google ifana noMnyango Wezemfundo. Uma izikole zifuna amadola kahulumeni kufanele zilandele amazinga athile angahle noma angafaneli izintshisekelo zomphakathi wazo. Uma ufuna inzuzo yokuvela kumiphumela yosesho kufanele uthobele imithetho ye-Google noma ngabe ingahambelani nezintshisekelo zakho. Ngicabanga ukuthi ukwehlukaniswa kwezinjini zokucinga kuyisidingo ngakho-ke asinayo inkampani eyodwa enkulu yokuhlukumeza abantu ekuziletheni. I-Google yenza izinto eziningi ezinhle ezisiza umphakathi wezobuchwepheshe kepha futhi zisebenza ngendlela yazo ngaso sonke isikhathi.
Feb 17, 2017 ngo-8: 53 AM
Angazi… Ngithole isaziso njengamanye amaklayenti ami. Angicabangi ukuthi kuyinkinga. Uma kwenzeka kaninginingi ngingakhathazeka kancane. Ngibanikeza ukudlula kulokhu.
Feb 17, 2017 ngo-9: 07 AM
Mhlawumbe unamakhasimende amahle?